I-Dumaguete GUEST STUDIO ye-6, kufutshane nombindi wedolophu - I-Airbnb
I-Dumaguete GUEST STUDIO ye-6, kufutshane nombindi wedolophu
Indlu engasemva yonke sinombuki zindwendwe onguThirdy
UThirdy ufumene umlinganiselo weenkwenkwezi eziyi-5 kwi-100% yeendwendwe zakutshanje.
Indawo yethu esandula ukwakhiwa ibekwe ngaphakathi kwendawo yabucala neseluxolweni yosapho, imizuzu emi-4 kude nedolophu. Yindawo epholileyo elungele iqela elincinci labahlobo okanye usapho oluncinci.
Ngokuqinisekileyo uya kuziva usekhaya apha.
Indlu yeendwendwe ine-air-conditioning, indawo enefenitshala epheleleyo kunye nebhedi yokumkanikazi kunye nebhedi yesofa. Umabonakude wentambo kunye ne-wifi ezinikeleyo nayo ifakiwe. Singakwazi nokubonelela nge-mattress emgangathweni elingana 2. Kwakhona, itafile e-four yokutyela, ikhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo kunye ne-induction cooker, (akukho oven) i-oven microwave, izinto zokupheka, iipani zokuqhotsa kunye ne-sause, i-cutlery, iipleyiti, i-pitcher. , iiglasi kunye neemagi. Sikwanaso nesifudumezi-manzi, isitovu serayisi kunye nesikhenkcisi nesikhenkcezisi esinokubamba iintsuku ezintathu zeempahla ezikhenkcezisiweyo. Siza kukubonelela ngeebhotile ezimbini zamanzi okusela acocekileyo kunye neengxowa ezimbalwa zekofu yasimahla simahla ngomhla wokufika. Igumbi lethu lokuhlambela elincinane lixhotyiswe ngeshawa eshushu. Kukho umatshini wokuhlamba iimpahla ozenzekelayo onokuwufumana ngentlawulo, indawo yokomisa ejingayo iyafikeleleka. Indawo yokupaka yanele kwizakhiwo.
Kungenwa ngo-2:00pm ukuya ku-8:00pm. Ukuba uceba ukungena emva kwentsimbi yesi-8:00pm, nceda uxoxe ngoku ngaphambi kokuba ubhukishe. Sikhetha ukushiya iindwendwe zizonwabele indawo ngaphandle kokuphazamiseka, kodwa siya kufumaneka ukukunceda ngayo nayiphi na imiba okanye izicelo.
Ukungena kwangethuba kunye nokuphuma kade kuyenzeka xa uceliwe.
Umlondolozi uyafumaneka ukuba angatshayela indlu yeendwendwe kwaye akhuphe imigqomo kuphela xa eceliwe. Sinokulungiselela isithuthi sikawonke-wonke xa sicelwe kwangaphambili. I-SUV ehlangeneyo inokufumaneka kwakhona kwisikhululo seenqwelomoya ngesaziso seentsuku ezimbini phambi kwe-PHP 300.
Iyunithi yindawo yokulahla ilitye kude nevenkile ye-7/11, isikhululo samafutha, indawo yokuhlamba impahla kunye nebhanki. Kwakhona kufutshane kukho amaziko amabini okutshintshela imali kunye nendawo yokutya okukhawulezayo yasekhaya.
Umbuki zindwendwe ngu- Thirdy
Zive ukhululekile ukundifowunela okanye undidubule umyalezo ngenombolo: +63 932 874 4903
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Dumaguete